सन्तान भएर पनि वृद्धवृद्धा आश्रमको भरोसामा, यसरी गर्छन अलपत्र ! – Nepali Audio Video
सन्तान भएर पनि वृद्धवृद्धा आश्रमको भरोसामा, यसरी गर्छन अलपत्र !
जिन्दगीको उत्तरार्धमा सन्तान आफ्नै साथमा रहूँन भन्ने कुन आमाको चाहना हुँदैन र , आफ्नो ज्यान आफैलाई भारी भएर घुँडाले बूढो शरीर धान्न नसकेको बेला घर, परिवार, छोराछोरी र आफन्तजनको सहारा हरेक वृद्धवृद्धाले खोज्छन् र यो स्वाभाविक हो ।
सन्तान भएर पनि बूढेसकालमा एक्लो जिन्दगी जिउनु पर्दा साह्रै विरक्त लाग्दो रहेछ मानव सेवा आश्रममा आश्रय लिइरहकी ९० वर्षीया रमा थापालाई ।
बाबुको मृत्युपछि दुई भाइ छोराले भएको सबै सम्पत्ति कुम्ल्याए र आमालाई सडकमा बेवारिसे छाडे । बूढेसकालमा आफ्नै छोराको आँखाको कसिङ्गर भएपछि उनी आश्रमको आड लागेको पनि आज सात महिना बितिसक्यो । अहिलेसम्म कुनै आफन्त पनि खोज्न आएका छैनन् ।
बूढेसकालमा पाल्ने एकमात्र छोराले सडकमै छाडेपछि टोखास्थित पवित्र समाज सेवा नेपालमा आश्रित हुनुपरेको छ ६० वर्षीया सुन्तली आमालाई ।
तीन भाइ छोरा भएर पनि काठमाडौँका सडकमा मगन्ते जीवन जीउन बाध्य छिन् उमेरले ७० काटेकी चितवनकी प्रीति खड्का । आफूले मागेर जीवन गुजारा गर्नुपरे पनि ती छोराको मायाले भने पिरोलिरहन्छ प्रीतिलाई ।
यी प्रतिनिधि आमाहरु मात्रै हुन् । डाँडामाथिका घाम बनेका यी वृद्धाहरु सन्तान भएर पनि वृद्धाश्रममा जेनतेन जीवन धानिरहेका छन् ।
छोराछोरीको गतिलै आय भए पनि वृद्धाश्रम भरोसामा बाँच्नुपर्ने बाबुहरु पनि उत्तिकै छन् । एकातिर सन्तान भएर पनि आश्रममा एकाँकी जीवन जीउनुपर्ने पीडा अर्कातिर शारीरिक दुर्बलता र उदासीनता ।
वृद्धाश्रममा बस्ने अधिकांश वृद्धवृद्धामध्ये धेरैका छोराबुहारी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायतलगायतका मुलुकमा राम्रै पेशा व्यवसाय गर्छन् ।
कतिपय त राजनीतिक दलका नेता तथा व्यापारीसमेत छन् । तर पनि आफ्ना आमाबाबुलाई वृद्धाश्रममा लगेर थन्काएका छन् । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका महासचिव छत्रबहादुर प्रधानले सम्पत्तिका कारण वृद्धवृद्धा बूढेसकालमा आफ्ना सन्तानबाट एक्लिनु परेको तर्क गर्नुहुन्छ ।
नयाँ पुस्तामा देखिएको व्यक्तिवादी सोचसँगै मौलाएको एकल परिवार ९श्रीमान्, श्रीमती, छोरा\_छोरी० को संरचनाभित्र जन्मदाता बाबुआमा नअटाएको देखिन्छ ।
अग्रज समाजका अध्यक्ष महाप्रसाद पराजुली बजार भाउ र महँगीलाई ध्यानमा राखेर ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै भएको वृद्धाभत्ता कम्तीमा रु पाँच हजार पु¥याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
विसं २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले रु १०० बाट शुरु गर्नुभएको वृद्धभत्ता अहिले रु दुई हजार पुगेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक ९दलित, महिला, लोपोन्मुख जाति, आदिवासी, कर्णालीवासी० र एकल महिलाले ५५ वर्ष र अन्य ज्येष्ठ नागरिकले ६५ वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने पछिल्लो पटक गरिएको छ । विगतदेखि नै नागरिकता नभएका कारण वृद्धाश्रमको आश्रय लिने कतिपय ज्येष्ठ नागरिक यस्तो सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ९६० वर्ष पुगेका० २५ लाख अर्थात कूल जनसंख्याको ८।१३ प्रतिशत छ । हाल विश्वमा ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक करिब ८० करोड रहेको अनुमान छ । यो संख्या सन् २०५० सम्ममा दुई अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विसं २०३३ मा पशुपति पञ्चदेवल समाज कल्याण केन्द्र ९हालको पशुपति वृद्धाश्रम० स्थापना गर्न नहुने टिप्पणी त्यतिखेर गरिए पनि अहिले देशैभरि करिब ८० वृद्धाश्रम रहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा संयुक्त परिवारभन्दा पनि एकल परिवारको संस्कृति मौलाउन पुग्दा ‘ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ’ भनी गरिएको संवैधानिक व्यवस्था जतिसक्दो चाँडो ऐन÷कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।